जेठदेखि आइतबार पनि विद्यालय बिदा
काठमाडौं। सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारले विद्यालयमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न बिदा कटौती गरेर सातामा दुई दिन शनिबार र आइबार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार बर्खे, हिउँदे, स्थानीयलगायतका बिदा कटौती गरेर विद्यालयमा जेठदेखि आइतबार बिदा दिन सकिने निर्णय गरेको हो। गत १३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठदेखि सातामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
बर्खे, हिउँदे बिदा कटौती कत्तिको सम्भव ? प्याब्सन भन्छ, छैन
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बैठकले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म १० बजेदेखि ४ बजेसम्म विद्यालय समय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। जसअनुसार अब शुक्रबार पनि पूरै समय पठनपाठन हुनेछ। बैठकले वार्षिक २० दिन अन्य बिदा कटौती गरे तोकेको पाठ्यघण्टा पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार आइतबार बिदा दिएर शुक्रबार ४ बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्दा साप्ताहिक रूपमा ३ घण्टा अपुग हुन्छ । तर, वर्षभरिका २० दिन बिदा कटौती गरेर कक्षा सञ्चालन गरेको अवस्थामा अपुग घण्टा पूरा हुन्छ।
सरकारले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहले आफू अनुकूल बर्खे, हिउँदे, स्थानीय, दसैं, तिहारलगायत चाडपर्व बिदा दिँदै आएको छ। अहिले हिउँदे, बर्खे गरेर ४५ दिन र स्थानीय बिदा ५ दिन दिइँदै आएको छ। ४५ दिनको हिउँदे, बर्खे बिदा ३० दिनमा झारेर विद्यालय सञ्चालन गर्दा आइतबारको बिदा पूर्ति गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उता, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन बिदा दिने औपचारिक निर्णय गरेलगत्तै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन भने त्यसको विपक्षमा उभिएको छ । प्याब्सनले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा पाठ्यभार पूरा गर्न सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले सातामा दुई दिन बिदा दिँदा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत १८० दिन पढाइ हुन नसक्नेसमेत जिकिर गरेको छ।
प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘सातामा दुई दिन बिदा दिँदा शिक्षा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत १८० दिन पढाइ हुन सक्दैन। शिक्षा नियमावलीअनुसार वर्षमा २२० दिन विद्यालय खोल्नुपर्छ र १८० दिन पढाउनैपर्छ। तर, दुई दिन बिदा दिँदा त्यो सम्भव हुँदैन। नयाँ व्यवस्थाले वर्षमा औसतमा २ सय दिन विद्यालय खुल्छ, यसले नतिजा प्रकाशनलगायतको कामका कारण १८० दिन पढाउन सम्भव हुँदैन र पाठ्यभार पूरा गर्न पनि सकिँदैन।’
उनले ४५ दिनको बिदालाई ३० दिनमा झार्ने भनिए पनि त्यो सम्भव नहुने बताए । ‘हिमालमा हिउँ पर्ने समयमा र पहाड र तराईमा वर्षामा बिदा दिनैपर्छ। त्यसकारण यी दुवै कुरा त्यति सहज छैन । त्यसकारण पाठ्यभार नै पूरा हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।’
उनले हिउँदे र बर्से बिदा कटौती सम्भव नहुने बताउँदै पाठ्यभार पूरा नभएको अवस्थामा बिदाका दिन पनि विद्यालय खोलेर पढाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए। ‘अब कक्षा नै सकिएन भने त जसरी पनि पढाउनुप¥यो नि ? हिउँदे र वर्षे बिदा कटौती गर्ने कुरा पनि त्यति सम्भव छैन। ’अबगकभ, हिमालमा हिउँ पर्ने समयमा बिदा दिनैपर्छ, पहाड र तराईमा वर्षामा बिदा दिनैपर्छ । त्यसकारण यी दुवै कुरा त्यति सहज छैन। त्यसकारण पाठ्यभार नै पूरा हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो।’ आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।
‘एक्सन’ मा मेयर हर्क साम्पाङ राई